Home Aragti-doon Wax ka ogow shanta dabeecad ee ugu waaweyn
Waxaad tahay mid ka mid ah shantan arrimood.
Waa in aad yeelato dabeecadahan mid ka mid ah. Haddabe middee isku aragtay? PHOTO: Unsplash
Cilmi-baarisyo casrigan la socda oo lagu sameeyay arrimaha Cilmu-nafsiga, waxaa lagu ogaaday in shaqsiyadda lagu cabiro shan arrimood oo aasaas ah.
Caddeymo arrimahan la xiriira ayaa sii xoogeysanayay muddo sanado ah – taas oo soo billaabatay sannadkii 1949.
Shanta dabeecad ee lagu qiimeeyo shaqsiyadda waxay kala yihiin:
In aad noqoto qof furfuran waa dabeecadda ku saleysan maleyn iyo garasho. Dadka leh shaqsiyadda noocan ah, waxay jecel yihiin in wax cusub ay bartaan, khibrad cusubna yeeshaan. Go’aanno wax ku ool ah oo aan gabasho lahayn ayey qaataan, waxaana usii dheer hal-abuur iyo in ay meel laga baqo iyaga u bareeraan.
Damiir u shaqeeya si buuxda oo dhammeystiran
Dabeecadda waxaa qeyb wayn ka ah in qofka uu si wanaagsan u fakaro, is xakameeyo uuna noqdo mid raacaya ujeedooyiin iyo hiigsi gaar ah. Qaabkan habeysan ee isku toosan waxaa laga helaa dadka inta badan ka shaqeeya seyniska iyo shirkadaha heerka sare ah ee dhaqaalaha – waana arrin ay xirfad ahaan u leeyihiin.
Qof bulsho badan
Qofka noocan ah waa dad noloshooda iyaga hagta. Waa dad si fudud lagu fahmi karo. Waa qof firfircoon marka uu dadka kale la joogo oo jecel wada-shaqeyn.
Raali ahaansho (qof dadka la heshiin karo)
Dadka wax kasta raaliga ka ah waxa ay muujiyeen astaamo aaminaad, akhlaaq, naxariis iyo jaceyl. Waa kuwo leh dabeecado aad u sarreeya oo la dhaqanka bulshada ah taas oo micneheedu yahay in dadka ay caawiyaan.
Dadka dabeecaddan leh waa kuwo murugeysan, iska xanaaqsan oo maskax ahaan aan xasillooneyn. Ma ahan kuwo dadka la dhaqmi kara. Waa arrin saameysa jirka iyo maskaxdaba, waxayna halis ku tahay nolosha maalinlaha ee qofka.
Previous article9 astaamood oo muujinaya in maskaxda aad ka xanuunsan tahay
Next article8 nooc oo shaah ah oo u wanaagsan maskaxda